पुराना यादहरु - Ddus Gajurel Blogs
on Monday, December 17, 2012 in अनुभब
केही दिन पहिले रुममा खाना नबनाउने सोचेर होटल तिर केही खान लागीयो साथि र म । खानै नखाने भए पछि किन खाना (भात) खानु अन्य केही कुरा खाने भनेर समोसा, पुरी अनि जुलफी मगाइयो । खँखै र्गदा कति कति बेला नजर बाटाका पैदल यात्री तिर पर्थो ।
एक जाना लगभग १३ १४ बर्ष को एक जाना भाई ले काउन्टरमा समोसा माग्यो । एसले २५ रुपैयाँको नोट दिएको थियो होटल साउले अब १ रुपैयाँ थप अनि २ वटा समोसा आउछ नत्र एउटा मात्र आउछ भन्दै थियो । सायद उ संग त्यही एउटा नोट मात्र थियो त्यसैले के गरु कसो गरु सोचे जस्तै एउटा मात्र समोसा लिएर उ त्यहा बाट बाटो लाग्यो ।
म सोच्दै गए सायद उ संग पैसा छैन ? अनि ति क्षणहरु याद आए जुन बेला भारतको पुणेमा हुँदा कुनै कुनै रातहरु भोकै भोकै ....... त्यो बेला म संग न त कसै संग सहयोग माग्ने अबस्था न त कोही चिनेको, कति रातहरु पनिको साहारामा बिते कति रातहरु
मैले त्यहा केही खानै सकिन, खान पनि मन लागेन, मात्र एउटै प्रश्न किन मानिसलाई केही भोकै बस्नु पर्छ ? के यसको समाधान छैन ? गल्लीको पेटीमा देखीने माग्नेहरुलाई देख्दा पनी यही प्रश्न मनमा आउछ .....